Esther fans pawl nih Esther winnerasi khawhnak ding caah fans meeting an au ve cang. Meeting ah an ceiding mi pawl – Thechinlungnews
Esther fans pawl nih Esther winnerasi khawhnak ding caah fans meeting an au ve cang. Meeting ah an ceiding mi pawl
Esther fans pawl caah thawngpang theihternak, Esther fans pawl zong nih Esther cu winnerasi khawhnak ding caah fakpi in rian ttuan an nih timh ve cang. Esther caah zeitindah rian kan ttuan lai i Mipi nih Esther vote na pek khawhnak ding caah zeibantuk in rian kan ttuan lai ti kong cei ding in Yangon an um mi Esther fans pawl nih meeting an au ve cang.
ညီမ Second Family လေးတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး တွေ့ချင်နေတဲ့ ဆန္ဒလေး ပြည့်ပါပြီ။ MMID က Camp ကနေ တစ်ရက် အပြင်ထွက်ခွင့်ပြုပါတယ် ။ 23 ရက်နေ့ တနင်္လာနေ့မှာ Fan Meeting လေးလုပ်ကြမယ်နော်။ တွေ့ကြ ၊ဆုံကြ ၊ပျော်ကြ ၊ ဆိုကြ ၊ ရိုက်ကြ မယ်။
*** Fan Meeting ကတော့ 5:00 pm ကနေ9:00 pm အထိကို KER Resident မှာ ( ကျောက်မျက်ရုံးရှေ့၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမကြီး) မှာ Second Family တွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးတွေ့ဆုံမယ်။ သီချင်းတွေဆိုကြမယ်။ Game တွေဆော့ကြမယ်။ Photo ရိုက်ကြမယ်။ Fan Meeting မှာ အားလုံးနဲ့ တွေ့ဆုံချင်ပါတယ်။ အားလုံးလာစေချင်လို့ ညနေပိုင်းမှ စီစဥ်ထားပါတယ်နော်။အားလုံးလာခဲ့ကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ။
ညီမဇာတိဖြစ်တဲ့ ဟားခါမြို့က အမျိုးတွေနဲ့လဲ တွေ့ချင်ပေမဲ့ တစ်ညအိပ်ပဲ အချိန်ရတာရယ်၊ လမ်းခရီးကြာချိန်ရယ်၊ ညီမက Final ပြိုင်ပွဲအတွက်လဲ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်နေရတဲ့အတွက် ပြိုင်ပွဲပြီးမှပဲ ပြန်လာမယ်နော်။ ညီမကို နားလည်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
Be the first to comment on "Esther fans pawl nih Esther winnerasi khawhnak ding caah fans meeting an au ve cang. Meeting ah an ceiding mi pawl"